Naraka: Bladepoint - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje - Ukudlala
Ingabe uNaraka: Bladepoint-to-play mahhala?
Imaphi amapulatifomu azothola uNaraka: Bladepoint?
Ungayilanda kanjani iNaraka: Bladepoint?
I-Naraka: I-Bladepoint iwumdlalo wokulwa wabadlali abangu-60 ogxile ekulweni kwe-melee, enikeza abadlali indlela ehlukile yokukhombisa ukuphakama kwabo ngaphezu kwabamelene nabo.
Naphezu kweqiniso lokuthi ikhishwe ekuqaleni kuka-Agasti, uNaraka ubonakale ethandwa kakhulu phakathi kwabathandi bemidlalo yokulwa. Ngenkathi i-Apex Legends, i-Fortnite, ne-Warzone kusengaba yimidlalo ye-war royale edume kakhulu emakethe, uNaraka ungomunye wesipiliyoni sempi esiyingqayizivele esitholakala namuhla.
Ifaka abalingisi abaningi, izikhali eziyingozi, kanye nemephu emangalisa kakhulu, isihloko se-24 Entertainment singumdubuli womuntu wokuqala okufanele usihlole.
Noma ngabe uthini umbuzo wakho mayelana nokuthi uNaraka: I-Bladepoint imahhala ukudlala noma ifuna nje ukwazi ukuthi itholakala kuziphi izinkundla, umhlahlandlela wethu ophelele uzokunikeza zonke izimpendulo ozidingayo.
Kusukela kulokhu kubhalwa, uNaraka: Bladepoint ayitholakali mahhala. Eqinisweni, abantu abafisa ukubamba iqhaza kulo mdlalo kuzofanele basebenzise u-$19.99 / £17.99 ukwenza lokho.
Yize imidlalo eminingi ye-warroyale imahhala ukudlala, i-24 Entertainment inqume ukukhokhisa abantu abafisa ukubamba iqhaza ezimpini zayo zabadlali abangama-60.
Okwamanje akuqiniseki ukuthi i-24 Entertainment izomenza yini uNaraka isihloko esingadlalwa mahhala ngokuzayo, kodwa okwamanje, abadlali bazodingeka ukuthi bathenge ikhophi yomdlalo.
Noma uNaraka: I-Bladepoint izokwethulwa i-PC ngo-Agasti 12, 2021, abasebenzisi abaningi be-console bazobuza ukuthi umdlalo uzoshicilelwa nini ama-consoles we-PlayStation 5 ne-Xbox One Series.
Nakuba kungekho vidiyo ekhishiwe yegeyimu esebenza ku-Xbox One, i-IGN ibonise igeyimu isebenza ku-PlayStation 5. Lezi yizindaba ezinhle ngokungangabazeki kubathandi be-Sony.
Umdlalo obonisiwe ubuvela esigabeni sokufundisa se-Naraka: Bladepoint, enikeza abalandeli umbono wokuthi yini abangalindela ukuyibona uma igeyimu iza ohlelweni.
Uma ufuna ukuthola uNaraka: Bladepoint, okumele ukwenze ukuya ku- I-Steam noma Imidlalo yama-Epic bese udala i-akhawunti. Ngemva kokudala i-akhawunti kunoma iyiphi ingxenyekazi, ungathenga igeyimu bese uqala ukuyilanda ngokushesha.
Lapho sithola ulwazi olwengeziwe mayelana noNaraka: Ukukhishwa kwekhonsoli esemthethweni yeBladepoint, sizobuyekeza lesi sihloko, ngakho sicela uhlole futhi ukuze uthole izibuyekezo.
I-MythBusters: Umdlalo - Ukuzijwayeza Okuhluke Kakhulu Kombukiso we-MythBusters
I-Outer Worlds 2: Idethi yokukhishwa, umdlalo wegeyimu, ne-Trailer!
Ngosuku Olwedlule - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje